Ama-Moments nabangani - I-Word Foundation
"Izikhathi Nabangane" isici se-Q & A The Word umagazini. Phakathi kwe-1906 ne-1916, imibuzo elandwe ngezansi yenziwa ngabafundi baka The Word futhi yaphendulwa nguMnu. Percival ngaphansi kwegama elithi “UMNGANE.” Ngokuhamba kwesikhathi, sinqume ukubeka igama lakhe njengombhali wezimpendulo. Ukugcina ubuqiniso obungokomlando, noma imaphi amaphutha wokubhala aye agcinwa kanye nokusetshenziswa kwezimpawu zokubhala okwakudumile ngaleso sikhathi.
Ngo-1986, i-The Word Foundation yakha inguqulo yekota yomagazini i-The Word esashicilelwa. Iphinde ifake isigaba esithi "Izikhathi Nabangane" esifaka phakathi imibuzo ebuzwe abafundi bethu.
Chofoza ngezinsuku ezinyangeni ezansi ukuthola izimpendulo zayo yonke imibuzo ebhalwe ngaphansi kwalolo suku.
Chofoza umbuzo ukuze uye empendulweni yalowo mbuzo.
Chofoza PDF ukuphindaphinda ngefomethi yasekuqaleni.
• Singasitshela kanjani lokho esikukho ekufakweni kwethu kokugcina?
• Singatshela ukuthi sizalwa kangaki ngaphambili?
• Ingabe siyaqaphela phakathi kokuphindukuzalwa kwethu?
• Yiziphi imibono yama-theosophika yokuzalwa kabusha kuka-Adamu no-Eva?
• Iyini ubude besikhathi esikhethwe phakathi kokuphindukuzalwa, uma kunesikhathi esithile esinqunyiwe?
• Ingabe sishintsha ubuntu bethu lapho sibuyela emhlabeni?
• Ingabe i-Theosophist ikholelwa ezinkolelweni?
• Yisiphi isisekelo sezinkolelo-ze ezizalwa nge "caul" zingase zibe nekhono elithile le-psychic noma amandla emimoya?
• Uma umcabango ungadluliselwa engqondweni yomunye, kungani lokhu kungenziwanga ngokunembile nangokuhlakanipha okuningi njengoba ingxoxo evamile eqhutshwa?
• Ingabe sinakho yini efana nokudluliselwa komcabango?
• Singaxoxa kanjani ngokucabanga ngokuhlakanipha?
• Kulungile yini ukufunda imibono yabanye ukuthi ngabe ngabe kufanele noma cha?
• Kungani kungcono ukuba umzimba uphelelwe emva kokufa kunokuba ungcwatshwe?
• Ingabe ikhona iqiniso ezindabeni esizifundayo noma ezikuzwayo, ngokuphathelene nama-vampires kanye ne-vampirism?
• Yisiphi isizathu sokufa okungazelelwe kwabantu ukuthi ngabe bancane yini noma ekugcineni kokuphila, lapho kubonakala sengathi iminyaka eminingi yokuwusizo nokukhula, engqondweni nangokwenyama, ikhona phambi kwabo?
• Uma ingalo yesibhakabhaka, umlenze, noma elinye ilungu lomzimba lingavunyelwe lapho ilungu lomzimba likhishwa, kungani umzimba we-astral ungakwazi ukukhiqiza enye ingalo noma umlenze ongokwenyama?
• Ingabe i-Theosophist ingumdli noma inyama yokudla?
• I-theosophist yangempela ingabheka kanjani ukuthi i-theosophist futhi isadla inyama uma sazi ukuthi izifiso zesilwane zidluliselwa kusuka inyama yenyama kuze kube umzimba womuntu odlayo?
• Akulona iqiniso yini ukuthi i-yogis yaseNdiya, namadoda okuthola izinto ezivela kuNkulunkulu, ihlala emifino, futhi uma kunjalo, labo abakuzozikhukhumeza bona bayakugwema inyama futhi baphile nemifino?
• Ukudla imifino kunomphumela womzimba womuntu, uma kuqhathaniswa nokudla inyama?
• I-vegetarianism ingavimbela kanjani ukuhlushwa kwengqondo uma imifino iyalulekwa ukuze ifinyelele ukuhlushwa?
• Iyini incazelo eqondile yezingqungquthela zegama, ezisetshenziselwa ukuxhumana okuningi ngama-theosophists nabasebenzisa imimoya?
• Kusho ukuthini "isisekelo sabantu"? Ingabe kukhona umehluko phakathi kwalo nomqondo ophansi?
• Ingabe kukhona okuyisisekelo okulawula izifiso, omunye olawula amandla amakhulu, omunye olawula imisebenzi yomzimba, noma olawula konke okuyisisekelo?
• Ingabe ukulawula okuyisisekelo okufanayo kokubili izenzo eziqaphelayo nemisebenzi engazi lutho yomzimba?
• Ingabe izinto ezisemqoka ezinkampanini eziguqukayo ezijwayelekile, futhi ingabe bonke noma ezinye zazo phakathi kokuziphendukela kwemvelo ziba ngamadoda?
• Ingabe kungenzeka ngempela ukuthi umuntu abone esikhathini esizayo?
• Akunakwenzeka yini ukuthi umuntu abone izenzakalo zangempela zezinto ezedlule nezenzeke njengoba zizoba esikhathini esizayo ngokucacile nangokucacile njengoba ebona okwamanje?
• Kungenzeka kanjani ukuthi umuntu abone ngokucacile uma ukubona okunjalo kuphikisana nakho konke okuhlangenwe nakho kwethu?
• Ziyini izitho ezisetshenziswe ku-clairvoyance, futhi umbono womuntu udluliselwa kanjani ezintweni eziseduze nalabo abasemadolobheni amakhulu, futhi kusukela owaziwayo obonakalayo obonakalayo engabonakali?
• Ingabe umlingo angabheka esikhathini esizayo noma nini lapho ethanda kanjalo, futhi ingabe usebenzisa ikhono le-clairvoyant ukwenza lokho?
• Uma umlingo angaphonsa umkhumbi ngoba kungani abangaboni bemimoya, ngabanye noma bahlangane ngokuhlanganyela nolwazi lwabo ngezenzakalo ezizayo?
• Iyini "iso lesithathu" futhi ingabe i-clairvoyant nomlingo bayisebenzisa?
• Ubani osebenzisa i-pineal gland, futhi yini into yokusebenzisa kwayo?
• Iso lesithathu noma i-pineal gland livuleka kanjani, futhi kwenzekani ekuvuleni okunjalo?
• Ingabe uKhisimusi inencazelo ethile kumuntu we-theosophist, futhi uma kunjalo, yini?
• Ingabe kungenzeka ukuthi uJesu wayengumuntu wangempela, nokuthi wazalwa ngosuku lukaKhisimusi?
• Ukube uJesu wayengumuntu wangempela kungani singenaso irekhodi lomlando lokuzalwa noma impilo yomuntu onjalo kunesitatimende seBhayibheli?
• Kungani bebiza lokhu, i-25th kaDisemba, uKhisimusi esikhundleni sikaJesumass noma uJesuday, noma ngegama elithile?
• Ingabe ikhona indlela esoteric yokuqonda ukuzalwa nokuphila kukaJesu?
• Wena wakhuluma ngoKristu njengesimiso. Ingabe wenza umehluko phakathi kukaJesu noKristu?
• Yisiphi isizathu esithile sokugubha usuku lwe-25th kaDisemba njengalolokuzalwa kukaJesu?
• Uma kungenzeka ukuba umuntu abe nguKristu, kufezwa kanjani futhi kuhlobene kanjani ne-25th ngoDisemba?
• Ingabe akulungile ukusebenzisa ingqondo esikhundleni sezinto ezingokwenyama ukuze uphulukise ukugula ngokomzimba?
• Ingabe kulungile ukuzama ukuphulukisa ukugula ngokomzimba ngokuphathwa kwengqondo?
• Uma kulungile ukuphulukisa ukugula ngokomzimba ngezindlela ezingokwengqondo, ukuhlinzeka ngezifo ezingokomzimba kunemvelaphi engqondweni, kungani kungalungile isosayensi engqondweni noma yobuKristu ukuphulukisa lezo zifo ngokuphathwa kwengqondo?
• Kungani kungalungile ukuthi ososayensi bengqondo bathole imali yokwelashwa kokugula ngokomzimba noma kwengqondo kuyilapho odokotela bekhokha imali yabo ejwayelekile?
• Kungani kungalungile isosayensi yengqondo ukuthola imali yokwelapha izifo lapho echitha sonke isikhathi sakhe kulo msebenzi futhi kufanele abe nemali yokuphila?
• Imvelo ingahlinzeka kanjani umuntu othanda ngempela ukuzuza abanye, kodwa ubani ongenakho indlela yokuzixhasa?
• Ingabe abaKristu nabangqondo basenzi kahle uma belapha ukwelapha lapho odokotela behluleka khona?
• Yisiphi isisombululo esinaso mayelana nokuthi yiziphi izidingo ezingqondweni isazi sesayensi okufanele sibe nazo?
• Ngamaphi indlela ikhono lokulandela ukusebenza komuntu siqu noma lomunye, nokubona ngempela izimbangela, ukuphikisa izimangalo zososayensi yengqondo nezomKristu?
• Yimiphi imiphumela yokwamukelwa nokusebenza kwemfundiso yama-christian noma ososayensi engqondo?
• Kungani abahlengikazi abaningi bezengqondo bephumelela uma bengaphili ukwelapha, futhi uma bekungewona okwakumele bazimele bona, iziguli zabo ngeke zithole iqiniso?
• Akuzange yini uJesu kanye nabangcwele abaningi baphulukise ukugula ngokomzimba ngezindlela ezingokwengqondo futhi uma kwakungalungile?
• Uma kungalungile ukuthola imali yokuphulukisa ukugula ngokomzimba ngezinqubo zengqondo, noma ngokunikeza "imfundiso yesayensi," akuyona yini iphutha ukuba uthisha wesikole athole imali yokufundisa abafundi kunoma yiliphi lamagatsha okufunda?
• (Encwadini eya kumhleli, i-March 1907 "Amaminithi nabangani" ihlaziywa, ilandelwa impendulo evela kuMnu. Percival.-Ed.)
• UmKristu uthi Umuntu unomzimba, umphefumulo nomoya. ITheosophist ithi Umuntu unemithetho eyisikhombisa. Ngamagama ambalwa yiziphi lezi zimiso eziyisikhombisa?
• Ngamazwi ambalwa ongangitshela ukuthi kwenzekani ekufeni?
• Abaningi abangokomoya bathi lapho bevela khona imiphefumulo yabashiya ivela futhi ixoxisana nabangani. I-Theosophists ithi lokhu akulona icala; ukuthi lokho okubonwayo akuwona umphefumulo kodwa igobolondo, i-spook noma umzimba wesifiso umphefumulo olahlekile. Ubani olungile?
• Uma umphefumulo womuntu ungase uboshwe ngemuva kokufa ngomzimba wesifiso saso, kungani lo mphefumulo ungabonakali ngezikhathi futhi kungani kungalungile ukusho ukuthi akubonakali futhi kuxoxisana nabahleli?
• Uma ukubukeka emibuthanweni kungukuthi ama-shells, ama-spook noma izidumbu zesifiso, eziye zahlukunyezwa yimiphefumulo yabantu emva kokufa, kungani bekwazi ukuxhumana nabahleli kwi-subject eyaziwa kuphela kumuntu othintekayo, futhi kungani ingabe indaba efanayo izokhulelwa kaningi?
• Iqiniso alinakuphikwa ukuthi imimoya ngezinye izikhathi ikhuluma iqiniso futhi inikeze iseluleko ukuthi uma ilandelwa kuyoholela ekuzuzeni bonke abathintekayo. I-theosophist, noma yiyiphi enye ephikisana nokuthanda izinto ezingokomoya, ephika noma echaze la maqiniso?
• Uma kuyiqiniso ukuthi akukho okunye ngaphandle kwamagobolondo, ama-spook kanye nezinhlangano ezingenayo i-manas ezibonakalayo, ngokusho kwemfundiso ye-theosophical, lapho kuvela khona, lapho kuvela khona ulwazi kanye nezimfundiso zesimo sefilosofi futhi esivamile sobhishobhi, okungenakuzaza ukuthi abanye abalamukeli bakutholile?
• Ingabe umsebenzi oshonile ngokwawo noma ngokubambisana ukuze uthole ukuphela okuthile?
• Abafileyo badla kanjani, uma kunjalo? Yini eqinisa ukuphila kwabo?
• Ingabe abafayo bagqoka izingubo?
• Ingabe abafileyo bahlala ezindlini?
• Ingabe ubuthongo obufile?
• Ingabe abafileyo bahlala emindeni, emiphakathini, futhi uma kunjalo uhulumeni?
• Ingabe kukhona isijeziso noma umvuzo wezenzo ezenziwa abafileyo, noma ngabe zisaphila noma emva kokufa?
• Ingabe abafileyo bazuza ulwazi?
• Ingabe abafileyo bayazi ukuthi kwenzekani kuleli zwe?
• Uchaza kanjani amacala lapho abafileyo bevele khona emaphupheni, noma kubantu abaphapheme, futhi bamemezele ukuthi ukufa kwabantu abathile, ngokujwayelekile amanye amalungu omndeni, kwase kuseduze?
• Ingabe abafileyo bakhangwa amalungu omndeni wabo ngenkathi esemhlabeni, futhi bawabuka; usho umama ohambe phezu kwezingane zakhe ezincane?
• Ezweni labafileyo kukhona ilanga nenyanga nezinkanyezi njengasezweni lethu?
• Kungenzeka yini ukuthi abafileyo bangathonya abaphilayo ngaphandle kolwazi ngabaphilayo, ngokuphakamisa imicabango noma izenzo?
• Ukhona umuntu owaziyo ukuthi isikhungo sibheke kuphi ilanga lethu namaplanethi alo kubonakala sengathi lihamba phambili? Ngifunde ukuthi kungenzeka ukuthi u-Alcyone noma uSirius.
• Yini eyenza inhliziyo yomuntu ishaye; ingabe ukududuza kwamaza avela elangeni, futhi kuthiwani ngokuphefumula?
• Kuyini ukuhlobana phakathi kwenhliziyo nemisebenzi yobulili-futhi ukuphefumula?
• Ingabe inyanga ihlobene kangakanani nomuntu neminye impilo emhlabeni?
• Ingabe ilanga noma inyanga ilawula noma ilawula isikhathi esibuhlungu? Uma kungenjalo, uthini?
• Ungangitshela lutho mayelana nemvelo yomlilo noma ilangabi? Kulokhu kubonakala sengathi kuyinto engavamile kakhulu. Angikwazi ukuthola ulwazi olwanelisayo ezincwadini zesayensi.
• Iyini imbangela yokushaya okukhulu, njengemililo ye-prairie nemililo ebonakala ibonakala ngesikhathi esisodwa kusuka ezingxenyeni ezihlukene zomuzi, futhi yini ukushisa okuzenzakalelayo?
• Zakhiwa kanjani izinsimbi ezifana negolide, ithusi nethusi?
• Uyakholelwa ekufundiseni izinkanyezi njengesayensi? Uma kunjalo, kungakanani okumele kucatshangelwe njengokuphathelene nokuphila komuntu nezithakazelo?
• Kungani umzuzu wokuzalwa ezweni elingokoqobo kuthonya isiphetho se-ego salowo mzimba?
• Isikhathi sokubeletha sinquma kanjani ukuphela komuntu emhlabeni?
• Amathonya ekubelethweni, noma ekugcineni komuntu, abambisana ne-karma ye-ego?
• Ingabe amathonya amaplanethi asetshenziselwe ukuphatha i-karma yabantu, noma isiphetho? Uma kunjalo, ingabe inkululeko yokuzikhethela ingena kuphi?
• Kungani ngezinye izikhathi kuthiwa uJesu wayengomunye wabasindisi besintu nokuthi abantu basendulo babekhona nabasindisi babo, esikhundleni sokuthi unguMsindisi wezwe, njengoba kubanjwe yiLobukholwa lonke?
• Ungasitshela ukuthi kukhona yini abantu abagubha ukuzalwa kwabahlengikazi babo noma ngokuzungeze usuku lwangamashumi amabili nanhlanu kaDisemba (ngesikhathi ilanga lisho ukungena uphawu lweCapricorn?
• Kuthiwa abanye ukuthi ukuzalwa kukaKristu kungukuzalwa okungokomoya. Uma kunjalo, kungani uKhisimusi igubha umzimba womzimba ngokudla nokuphuza, ngendlela engokwenyama, okungafani kakhulu nemibono yethu engokomoya?
• Ku "Amaminithi Nabangani," kuMqulu. I-4, ikhasi le-189, kuthiwa uKhisimusi lisho ukuthi "Ukuzalwa kwelanga elingabonakali lokukhanya, isimiso sikaKristu," okuqhubekayo, "Kufanele kuzalwe ngaphakathi komuntu." Uma kunjalo, ingabe kulandela ukuthi umzimba Ukuzalwa kukaJesu kwakungomhla weshumi nanhlanu kaDisemba?
• Uma uJesu noma uKristu engazange aphile futhi afundise njengoba kufanele ayenzile, kanjani ukuthi iphutha elinjalo lingase linqobe amakhulu eminyaka futhi kufanele lithande namuhla?
• Ingabe usho ukusho ukuthi umlando wobuKristu awuyona into kodwa intokwane, ukuthi impilo kaKristu iyinkolelo, futhi ukuthi cishe iminyaka eyi-2,000 izwe liye lakholelwa emlandisweni?
• Uma i-astral intelligences iyakwazi ukubona ngendaba, kungani kungabikho ukulawula umoya okuphakathi kokukwazi ukuhlangabezana nokuhlolwa kokubala okwenziwe manje kwe-orange?
• Iyiphi incazelo echaza ukuthi i-Theosophy inikeza ukuzamazama komhlaba okuqhamuka njalo, futhi okungabhubhisa izinkulungwane zabantu?
• Kuyini ukuzalwa okuvela kuNkulunkulu noma ukuzalwa komuntu oPhezukonke?
• Iyini ukusetshenziswa noma umsebenzi womzimba we-pituitary?
• Iyini ukusetshenziswa noma umsebenzi we-gine pineal?
• Iyini ukusetshenziswa noma umsebenzi wephethini?
• Iyini ukusetshenziswa noma umsebenzi we-gland yegciwane?
• Ingabe unengqondo yezilwane futhi bacabanga?
• Ingabe noma yimuphi umthelela omubi uyolethwa kubantu ngokukhona kwezilwane ezifuywayo?
• Kukhona yini isizathu sokumangalelwa kwalabo abathi imiphefumulo yabantu abahambayo ihlala ezinyoni noma ezilwaneni?
• Ungachaza ngokugcwele ukuthi imicabango yomuntu eyehlukile isebenza kanjani endabeni yomhlaba wenyama ukuze kukhiqizwe izinhlobo ezahlukahlukene zezilwane ezifana nebhubesi, ibhere, ipigogo, inyoka yenyoka? (Lo mbuzo ubhekisa ekuhlelweni kukaPercival Ucabanga-Umhl.)
• Ingabe umuntu angabheka ngaphakathi emzimbeni wakhe futhi abone ukusebenza kwezitho ezihlukene, futhi uma kungenzeka kanjani lokhu?
• Ngamaphi amaphuzu abalulekile umhlaba we-astral ohluke kuwo ongokomoya? Leli gama livame ukusetshenziselwa ngokungafani ezincwadini nakumagazini abhekane nalezi zihloko, futhi lokhu kusetshenziselwa ukudida ingqondo yomfundi.
• Ingabe isitho ngasinye somzimba siyinhlangano ehlakaniphile noma ingabe senza umsebenzi wayo ngokuzenzakalelayo?
• Uma isitho ngasinye noma ingxenye yomzimba womzimba imelwe engqondweni, kungani umuntu ongenangqondo engalahlekelwa ukusetshenziswa komzimba wakhe lapho elahlekelwa ukusetshenziswa kwengqondo yakhe?
• Akubonakali kunengqondo ukuthi imibono emibili noma ngaphezulu engqubuzanayo ingalungile ngokuphathelene nanoma yiliphi iqiniso. Kungani kukhona imibono eminingi kangaka mayelana nezinkinga ezithile noma izinto? Sizokwazi kanjani ukutshela ukuthi yimiphi imibono elungile nokuthi yiliphi iqiniso?
• Kungani amatshe ayigugu abelwe izinyanga ezithile zonyaka? Ingabe lokhu kubangelwa yinoma yini enye kunabantu abathandekayo?
• Ingabe idayimane noma elinye itshe eliyigugu liyigugu ngaphandle kwalokho elimelelwa ngumgomo wemali? futhi, uma kunjalo, ukubaluleka kwedayimane noma kwenye itshe elinjalo kuncike kuphi?
• Ingabe umoya usebenza nomuntu futhi yiziphi izinto ezingokomoya?
• Ayikho yini inkolelo yokuthi ama-Atlante angahamba? Uma kunjalo, inkolelo enjalo iphi?
• Ingabe abantu abazama ukuxazulula inkinga yokuhamba ngezindiza, aba-Atlanteans abaphindaphindiwe?
• Uma ama-Atlante axazulule inkinga yokuhamba ngezindiza, futhi uma labo abathintekayo inkinga efanayo beyi-Atlanteans, kungani laba bantu bengazange baphinde bavuselele kusukela ekucwileni kwe-Atlantis nangaphambi kwesikhathi samanje, futhi uma bebuye baphinde baqale uneminyaka yobudala, kungani bengakwazi ukuqonda umoya noma ukuhamba ngaphambi kwesikhathi samanje?
• Ingabe thina noma thina asibumbene ne-atma-buddhi?
• Akulona iqiniso yini ukuthi konke esingase sibe khona kakade kakade kithi nokuthi konke okumelwe sikwenze ukuwuqaphela?
• Ingabe ubumnyama abukho ukukhanya, noma kukhona into ehlukile ngokwayo futhi ethatha indawo yokukhanya? Uma zihlukile futhi zihlukanisiwe, yikuphi ubumnyama nokukhanya?
• Iyini i-radium futhi kungenzeka kanjani ukuba ilahle ngokuqhubekayo amandla amakhulu ngaphandle kokulahlekelwa nokulahleka okubonakalayo kwamandla nomzimba wayo, futhi yini eyimithombo ye-radioactivity yayo enkulu?
• Kungenzeka yini ukuthuthukisa izinhlobo ezintsha zemifino, izithelo noma izitshalo, ezihluke ngokuphelele futhi ezihlukile kunoma yiziphi ezinye izinhlobo ezikhona? Uma kunjalo, kwenzeka kanjani?
• Kungenzeka yini futhi kulungile ukubuka ikusasa nokubikezela izenzakalo zesikhathi esizayo?
• Kungenzeka yini ukubeka ingqondo engqondweni? Uma kunjalo, lokhu kwenziwa kanjani; umuntu angayenza kanjani ukuphindaphinda kwayo futhi ayigcine engqondweni?
• Ingabe labo abangabakwaMfihlo Imikhakha banomphumela wokwehlisa noma ukuthuthukisa ingqondo ekuziphendukeleni kwayo? Kungenzeka yini ukuthola lutho ngaphandle?
• Kungani abantu bezama ukuthola okuthile ngokungenalutho? Abantu abonakala sengathi bathola lutho ngeze, kufanele bakhokhele lokho abakutholayo?
• Yiziphi umehluko obalulekile phakathi kweTheosophy ne-New Thinking?
• Iyini imbangela yomdlavuza? Ingabe ikhona ukwelashwa okuwaziwayo noma ingabe enye indlela yokwelashwa kufanele itholakale ngaphambi kokuba ukwelashwa kwayo kusebenze?
• Kungani inyoka ithathwa ngokuhluke kakhulu ngabantu abahlukene? Ngezinye izikhathi inyoka ikhulunywa njengommeleli wobubi, ngezinye izikhathi njengophawu lokuhlakanipha. Kungani umuntu enesaba esinjalo sezinyoka?
• Ingabe ikhona iqiniso ezindabeni ukuthi amaRicicrucian ayekade eshisa izibani? Uma kunjalo, zenziwe kanjani, zenzeni izinhloso, futhi zingenziwa futhi zisetshenziswe manje?
• Kungani ukhozi lusetshenziswa njengesibonakaliso sezizwe ezihlukahlukene?
• Ingabe i-ukhozi ekhanda ngokuphindwe kabili manje isetshenziswa njengesiginali sikazwelonke samazwe athile, futhi esitholakala ezikhumulweni zamaHiti zasendulo ngezikhathi zeBhayibheli, sibhekisela esimweni esibuhlungu somuntu?
• Ezingxenyeni ezine nangesigamu sesigamu sombuthano kwi-Masonic Keystone yeRoyal Arch Chapter yizinhlamvu ze-HTWSSTKS Ingabe zikhona ukuhlobana kwe-Zodiac, futhi izikhundla zabo ezungeze umbuthano zibonisani?
• Kuyini Ukudla Ekudleni?
• Ingabe ukunambitheka kokudla noma yikuphi ukubaluleka njengokudla ngaphandle kokudla?
• Umuntu angazivikela kanjani amanga noma ukunyundela abanye?
• Izilwane ezihlambalaza zihlala kanjani ngaphandle kokudla futhi zibonakala zingenawo umoya phakathi nezinkathi zesikhathi eside zokubuthwa kwe-hibernation?
• Ingabe isilwane esinamaphaphu singaphila ngaphandle kokuphefumula? Uma kunjalo, ihlala kanjani?
• Ingabe isayensi ithola noma yimuphi umthetho umuntu angaphila ngaphandle kokudla kanye nomoya; Uma kunjalo, babe namadoda aphila kanjalo, futhi yimuphi umthetho?
• Kungani isikhathi sihlukaniswe njengoba kunjalo?
• Ingabe isikhathi sisezinhlangothini zayo sibe iminyaka, izinyanga, amasonto, izinsuku, amahora, imizuzu nemizuzwana noma yikuphi ukuxhumana nokuphila noma ezinye izinqubo emzimbeni womuntu? Uma kunjalo, yiziphi izingxoxo?
• Umuntu angaphila yini, aqedele imisebenzi yakhe, afe kumpilo engaphezu kweyodwa phakathi nesikhathi esabiwe seminyaka kulo mhlaba?
• Kungenzeka yini ukuthi izinto ezisemqoka, ngezinqubo zemilingo, zingeniswe ngefomu lokukhonkolo ngezandla; Uma kunjalo, iyiphi ifomu elithile elizokhiqizwa futhi lenziwa kanjani?
• Izandla kufanele zisetshenziswe kanjani ekuphulukiseni komzimba wakho womzimba noma noma iyiphi ingxenye yomzimba?
• Yini edingekayo ekukhuleni kokuzinikela?
• Iyini uhlobo lempepho, futhi sekuyisikhathi esingakanani ukusetshenziswa?
• Ingabe kukhona izinzuzo ezitholakala ekushiseni impepho, ngesikhathi sokuzindla?
• Ingabe imiphumela yempepho ibonakala ebonakalayo kunoma yiziphi izindiza?
• Yimaphi imibala, izinsimbi kanye namatshe kuthiwe amaplanethi ayisikhombisa?
• Ingabe ukugqoka imibala, izinsimbi namatshe kunqunywe yisici salowo mbulunga ngaphansi kwalowo ombetheyo owazalwa?
• Unemibala, izinsimbi namatshe noma yiziphi izimfanelo ezikhethekile, futhi zingagqokelwa kanjani ngaphandle kokubheka amaplanethi?
• Yiziphi izinhlamvu noma izinombolo ezifakiwe noma ezinikezwe amaplanethi?
• Ingabe umuntu i-microcosm ye-macrocosm, indawo yonke incane? Uma kunjalo, amaplanethi nezinkanyezi ezibonakalayo kumele zimelwe ngaphakathi kuye. Zitholakalaphi?
• Kusho ukuthini impilo ngokujwayelekile? Uma kungumlinganiso wamandla omuntu, engqondweni nangokomoya, ngabe ibhalansi igcinwa kanjani?
• Kungcono yini ukuba indoda iphume emzimbeni wayo engazi lutho, ukuthi umphefumulo ungangena esimweni saso sephupho?
• Imiphi imiphefumulo imifinyelelo efinyelelekayo eshiya umzimba wayo ngokucophelela futhi ohlala ekhumbula ngemva kokufa?
• Sicela unikeze incazelo yokungafi kanye nombuso kafushane ukuthi ukungafi kungafinyelelwa kanjani?
• Ingabe ukuthandwa komuntu nokungazithandi ukucabanga komphefumulo wakhe? Uma kunjalo, kubonakala kanjani? Uma kungenjalo, zivelaphi lezi zithandwa futhi ezingathandi?
• Kungcono yini ukuthi indoda ikwazi ukucindezela izifiso zayo zobulili, futhi kufanele izame ukuphila impilo yokunganaki?
• Iyini inqubo yemfundiso yokubuyisana, futhi ingahlanganiswa kanjani nomthetho we-karma?
• Kuyini ukuhleka, futhi kungani abantu behleka?
• Kuyini ukuhlobana phakathi kwe-magnetism ne-gravitation, futhi bahluke kanjani, uma kunjalo? Futhi yikuphi ukuhlobana phakathi kwamagnetism nesilwane samagnetism, futhi bahluke kanjani, uma kunjalo?
• Kuphi ukwelashwa okwenziwa yi-magnetism yesilwane?
• Ingabe i-magnetism yezilwane, i-mesmerism, ne-hypnotism ehlobene, futhi uma kunjalo, ihlobene kanjani?
• I-magnetism yesilwane ingasetshenziswa kanjani, futhi ingabe ingasetshenziswa ngayiphi indlela?
• Uyini umuzwa wokuhogela; senza kanjani; ingabe izinhlayiya zomzimba zihlanganyela ekwenzeni ukuzwa, futhi yisiphi isici esithinta ukudlala?
• Uyini umcabango? Ungalinywa kanjani futhi usetshenziswe?
• Iyini isifo nokuthi yikuphi ukuxhumeka kunamabhaktheriya?
• Yini umdlavuza futhi ingabe ikhambi, futhi uma ingelashwa, iyini ikhambi?
• Iyiphi indlela enhle yokuxhuma izifunda zokuvuka nokuphupha ukuze kungabi khona isikhashana ngesikhathi umuntu olele engazi lutho?
• Yini eyasikhuthaza ukuba sishushise imibono yethu? Sivunyelwe kangakanani ukuphikisa imibono yethu kulabo abanye?
• Kungenzeka kanjani ukuthi izinkinga eziye zahlukumeza yonke imizamo futhi zibonakala zingenakwenzeka isisombululo ngesikhathi sokuvuka kufanele zixazululwe ngesikhathi sokulala noma ngokushesha lapho zivuka?
• Iyini inkumbulo?
• Yini ebangela ukulahlekelwa kwememori?
• Yini eyenza umuntu akhohlwe igama lakhe noma lapho ehlala khona, nakuba inkumbulo yakhe ingase ingaphumeleli kwezinye izici?
• Yini evame ukushiwo igama elithi "Umphefumulo" futhi igama elithi Soul kufanele lisetshenziswe kanjani?
• Akuyona imfundiso yamaTheosophika yokuhlupheka kwethu emhlabeni njenge karmic retribution, ngokuhambisana nesitatimende seTheological sokuhlupheka kwethu njengempindiselo esihogweni, lapho lezo zombili iziqinisekiso kufanele zamukeleke ngokholo kuphela; futhi, ngokuqhubekayo, omunye ufana nomunye ukukhiqiza ubuhle bokuziphatha?